Football Khabar » युभेन्टसलाई ठूलो झट्का : चिलिनी ६ महिना मैदानबाहिर !
युभेन्टसलाई ठूलो झट्का : चिलिनी ६ महिना मैदानबाहिर !
इटालियन क्लब युभेन्टसलाई नयाँ सिजनको सुरुमै ठूलो झट्का लागेको छ । यसपटक ठूला प्रतियोगिता जित्ने दौडमा रहेको युभेन्टसका कप्तान तथा रक्षापंक्तिका प्रमुख खेलाडी जर्जियो चिलिनी चोटका कारण ६ महिना मैदानबाहिर रहने भएका छन् । अघिल्लो दिन क्लब युभेन्टसले अफिसियल रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आफन कप्तानको दायाँ खुट्टाको घुँडामा चोट परेको र त्यसका लागि अप्रेसन गर्नुपर्ने पुष्टि गरेको छ । सामान्यतः यस्तो अप्रसेनका लागि खेलाडीलाई ठीक भएर मैदान फर्किन ६ महिना समय लाग्न सक्छ ।
चिलिनी अघिल्लो दिन प्रशिक्षणक्रममा घाइते भएका थिए । चेकजाँचपछि उनी ‘एसिएल इन्जुरी’बाट पीडित बनेको पुष्टि भएको हो । यस्तो समस्यामा अप्रेसन नै अन्तिम विकल्प हो । अप्रेसनपछि सुधार कति चाँडो हुन्छ भन्ने कुराले खेलाडीको मैदान फर्किने दिन निर्भर गर्छ । अब चिलिनीको टोली युभेन्टसलाई कठिन हुने पक्का छ । टोलीको रक्षापंक्ति सम्हाल्ने मुख्य खेलाडी लामो समय मैदानबाहिर रहने भएपछि घरेलु लिग सिरी ‘ए’ र च्याम्पियन्स लिग जित्ने अभियानसमेत थप चुनौतीपूर्ण हुने भएको छ ।
लिगको साबिक विजेता युभेन्टस यसपटक तीनवटै घरेलु उपाधि र युरोपियन उपाधिसमेत जित्ने अभियानमा छ । तर, चिलिनीको चोटले युभेन्टसको योजना र तयारी संकटमा पर्ने देखिएको छ । युभेन्टसले आज शनिबार घरेलु लिगमा नापोलीको सामना गर्दैछ । यद्यपि, चिलिनी घाइते भएसँगै अब टोलीमा नयाँ डिफेन्डर माथिस डि लिग्टमाथि थप जिम्मेवारी बढेको छ । युभेन्टसले यसै समरमा डच क्लब आयाक्सबाट अनुबन्ध गरेका युवा डिफेन्डर अब युभेन्टसको रक्षापंक्तिका एक प्रमुख हिस्सा बन्नेछन् । यो समयका स्टार युवा डिफेन्डरका रूपमा चिनिएका उनका लागि इटालीमा सुरुआती दिन भने संघर्षपूर्ण देखिएका छन् ।
प्रकाशित मिति १४ भाद्र २०७६, शनिबार ०५:११